दुइतिहाइको सरकार र अस्थिरताका अढाइवर्ष : ओली– परिचय निर्णय फेरिरहने पहिलो प्रधानमन्त्री ! « Nepal'S Largest Digital Online Newspaper (Magazine)
दुइतिहाइको भनी आफैले सम्वोधन गर्ने गरेको सरकार ३२ महिनाबाट उकालो लाग्ने दिनको सेरोफेरोमा १२ औँ पटकको मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको चर्चाले तत्काल सम्पन गर्नुृपर्ने काम कुराका अरु सबै विषयहरुलाई ओझेलमा पारिरहेकै छ । मन्त्रिपरिषदको फेरवदल सरकारको एउटा सामान्य काम मानिएपनि यस भित्र अस्थिरता र विवादका चरम सृंखलाहरु जोडिएका हुन्छन । भरखरकै चर्चामा आएका विवरण त्यसका उदाहरण हुनसक्तछ ।
अहिलेको यो पुनर्गठनको पृष्ठभूमि बैशाख ८ को प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक दल फुटाउने सन्दर्भको एउटा कामकाट सुरुभएर वारपारका गम्भीर मोडहुँदै असोजको यो पहिलो हप्तासम्म आइपुगेको हो । बैशाख १० मा २० जना सदस्यले स्थाइसमितिको माग गरेका थिए । त्यसको मूल कारण थियो प्रधानमन्त्री र सरकारको कार्यशैलीले पार्टी अप्ठ्यारोमा परेको भन्ने । बैशाख २६ स्थाइसमितिको बैठक बोलाइएको थियो । यो असोज पहिलो हप्ताको स्थाइ समितिको बैठक त्यसैकै निरन्तरता हो ।
यो बीचमा वितेका यो वर्षका महिनाहरु बैहाख, जेठ, असार, साउन, भदौका प्रया सबै दिन विवादमै विते । कहिले चर्को र कहिले नरम भए होलान । चालुवर्षको पहिलो महिना बैशाखमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा प्रमुख विषय बन्यो । प्रधानमन्त्रीले नै एकजना नेता (बामदेव) लाई आफूपछिको प्रधानमन्त्री भनेर प्रस्तुत गरे । त्यसबेला प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको माग कुन तहमा पुगेका रहेछ भन्ने दुइतिहाइको सरकारका वहालवाला प्रधानमन्त्रीले अर्को प्रधानमन्त्रीको नाम प्रस्तुत गर्नु भनेको चानचुने कुरा होइन ।
त्यही, अर्को प्रधानमन्त्रीको नाम प्रस्तुत गरेपछि त्यो विवाद केही पर सरेको थियो भने फेरी असारमा नै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग बाटै जटिल विवादको यात्रा सुरुभएको थियो । मन्त्रिपरिषदको अहिलेको पुनर्गठन चर्चा प्रधानमन्त्री हटाउने, जोगिने र जोगाउने सन्दर्भमा आएको बुझन सकिन्छ ।
यहीठाउँमा अनुमान गरौं, एउटा पुनर्गठनले यत्रो समय लिँदोरहेछ भने ३२ महिनामा १२ वटा पुनर्गठनले कति समय खायो होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । सरकाकरोसमय खेरजानु भनको महत्वपूणृविषय ओझेलमा पर्नु हो भन्ने उल्लेख भरहनु नपर्ला
प्रधानमन्त्रीका अस्थीर बोली
याी पुनर्गठनमा अरु जे भएपनि प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुराको चाहिँ परीक्षण भयो । त्यो हो उनले बोलेको कुरामा भरपर्नुृ हुँदैन भन्ने । दुइतिहाइको सरकार चलाइरहेका प्रधानमन्त्रीको बोली यति हलुका हुन्छ भने क्षणक्षणमा ती फेरिइरहन्छन भने यी भन्दा अर्का अस्थिरताका संकेत के होलान ?
भदौ १९ गतेका दिनका मन्त्रिपरिषदको बैठकमा प्रधानमन्त्री के ओलीले तत्काल मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन नहुने बताए । समाचारमा आए अनुसार बालुवाटार निवासमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मन्त्रीहरुलाई आफ्नो मन्त्रालयको काम रफ्तारमा गर्न निर्देशन दिँदै यस्तो बताएका हुन । उने भने –कुनैपनिहालतमा मन्त्रिमण्डल हेरफेर हुँदैन, ढुक्क भएर काम गर्नोस । ‘हल्लाको पछि नलाग्नुस, तत्काल सरकार पुनगर्ठन हुँदैन, ढुक्कसँग आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न लाग्नुस ।’
असौज ४ मा फेरी अर्को समाचार आयो । प्रधानमन्त्री ओलीको हवाला दिदै – ‘राम्रो काम गरेकालाई राखौं, बाँकी नयाँ थपौं’ भन्ने प्रस्ताव राखेको भनेर । यो दिन नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक थियो । तयसबारे समाचारमा भनिएको छ – त्यसमा सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको बाटो खोलेपछि नेकपामा आइतबारेदेखि यसमा औपचारिक छलफल सुरु भयो ।
आइतबार पेरिसडाँडामा बसेको सचिवालय बैठकमा मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठनलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर छलफल गरिएको हो । तर, कहिलेसम्म गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन । पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने ‘स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयअनुसार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने तय भएको छ । ।’ एकसदस्यका अनुसार हाल राम्रो काम गरेकालाई राख्ने र बाँकी नयाँ थप्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव छ ।
समाचारमा थप भनिएको ‘सचिवालयका सदस्यहरुको सुझाव, अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा सम्वैधानिक व्यवस्था, कानुनी प्रबन्ध र निश्चित मापदण्डका आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन तथा राजनीतिक नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय गर्ने । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिका सम्बन्धमा योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुनेगरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने ।’
यो ठाउँमा अरु जेसुकै भनियोस तर मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनका सन्दर्भमा आफुले मन्त्रीहरुलाई तीन दिनअघि दिएको जोडबलका साथको आश्वास यो ठाउँमा खण्डित भयो । यद्यपि पुनर्गठन भैहालेको छैन । तर माथि उल्लेख भएका विवरणले कुनैपनि क्षण त्यस्तो हुन्छ भन्ने सन्देश दिइसकेको छ र मन्त्रालयमा को जाने को आउने भन्ने चर्चाले अरुकाम रोकिन थालेका उदाहरण प्रकट भैरहेका छन् ।
यस प्रकारले यो अढाई वर्षको समयमा यसअघि १२ औं पटक यस्तो पुनर्गठन भैसकेको मान्ने हो भने सरदरमा तीनमहिना भन्दा कम समयमा एउटा सरकार फेरिइरहेको छ । यस्तो त धेरैदल मिलेर बनेको सरकामा पनि भएका थिएनन होला ।
प्रधानमन्त्रीका अस्थीर काम
मन्त्रिपरिषदका बारे त्यसको गठन पुनर्गठन जे गर्ने हो त्यो प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकको कुरा हो । तर दुइतिहाइका प्रधानमन्त्रीबाट त्यसको प्रयोग समेत भएन । यसमा कि उनको छनौट गलत थियो कि उनी बाह्य प्रभावमा काम गरिरहेका छन भन्ने बुझनु पर्ने हुन्छ । यी दुबै कुरा देशका लागि गलत हुन् ।
सरकारका जुनसुकै विभागका काम हुन त्यसमा यदि ती गलत र तत्कालै फिर्ता लिनुपर्ने खालका रहेछन भने त्यसको दोषपनि प्रधानमन्त्रीमा नै जान्छ । अझ प्रधानमन्त्रीकै अग्रसरतामा भएका काम कुरा केही क्षणसम्मपनि टिक्दैनन भने ती प्रधानमनत्रीको शाकसकीय क्षमताको परीक्षण हुने ठाउँ बन्छ । आफैले प्रस्ताव गरेको कुरा केही क्षणमा आफैले फिर्ता लिन्छन भने त त्यस्ता प्रधानमन्त्रको शासनले राष्ट्रलाई नोक्सानी बाहेक दिन केही बाँकी रहँदैन । चालु वर्षको प्रारम्भ मै प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको एउटा कामले सरकार कति अस्थिर छ र प्रधानमन्त्री निर्णय फेरिइरहनेमा कुन ठाउँमा छन भन्ने देखाउछ ।
यो सरकार गठनभएको पहिलो हप्ताबाटै सुरुएभएको थियो आफना निर्णय उल्टाएर देशकै शासकीय स्थाइत्वलाइ अस्थीर बनाउने काम । त्यसकै पुनरावृत्ति हुनुपर्छ पछिल्लो समय ‘दल फुटाउन सजिलो बनाउने अध्यादेश’ जारी र फिर्ता लिँदाको काम जो यो सरकारका दर्जर्नौ मध्येमा पर्छ । मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर औपचरिक कानुन बनेको पाँचै दिन (८ –१२ बैशाख) मा आफैबाट उल्ट्याइएको यो घटना प्रधानमन्त्रीको विशेष अग्रसरतामा भएको भन्ने त्यसबेलाका समाचारहरुले नै वताउका हुन् ।
विगतमा नै निर्णय गर्दै त्यसबाट विपरीत नै हुनेगरी पछि हट्दै गरेका थुप्रै उदाहरण कायम भैसकेका थिए । त्यसमा थपियो यो राजनीतिक दललाई बिभाजन गर्न सजिलो बनाउने र सम्वैधानिक परिषदले सम्वैधानिक निकायमा नियुक्ती गर्दा प्रमुख प्रतिपक्ष नभएपनि हुने भन्ने व्यवस्था गरेकोे अध्यादेश । यो राम्रो नराम्रो के थियो भन्ने अर्कै कुरा हो । देशमा लकडाउनको समय महिनाभन्दा बढीमा चलिरहेको बैशाख ८ को एकदिनमै मन्त्रिपरिषदबाट पारित, राष्ट्रपतिमा सिफारिश, राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत र राजपत्रमा सूचना जारी भयो ।
अर्थात अव यसले यी सबै चरण पुराभएर राजकीय कामको औपचारिक रुप लियो । ठीक त्यसको पाँचौं दिन फेरी त्यही प्रकृया – मन्त्रिपरिषदबाट पारित, राष्ट्रपतिमा सिफारिश, राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत र राजपत्रमा सूचना जारी भैसकेपछि अर्थात कानुनी प्रकृया सबै पुरा भएपछि यो फिर्ता भयो । यसको अर्थ हो सरकारी निर्णय केटाकेटीको खेलमा परिणत हुदैछन । भनिनै सकियो यसरी सरकारी निर्णय फिर्ता भएको घटना यो सयौं मध्येको एउटा थियो ।
यो काम गोप्य राखिएको अवस्था झनै आपत्ति युक्त थियो । यसो हुँदाका क्रममा यी अध्यादेश किन आए र किन फिर्ता भए भन्ने बारे न प्रधानमन्त्री न उनका प्रवक्ता कसैले पनि सर्वसाधारणलाई एकशव्दमा जानकारी दिन आवश्यक ठानिएन । मन्त्रिपरिषदका निर्णय प्रवक्ता मार्फत सार्वजनिक गर्ने परम्परा पनि यो ठाउँमा तोडियो । यो आफै त्यसकारण शंकास्पद भयो । अध्यादेश भनेको कानुन हो । जव सरकारले कानुन बनाउनु पर्ने कारणनै गोप्य राख्न खोज्छ भने शंका त उव्जने भयो नै ।
२५ वर्ष अघिको भन्दा अस्थिर
देशमा अस्थीर सरकारका लागि वितेको २५ वर्षको समय (०५२ –७४) लाई उदाहरण दिइन्छ । तर राजकीय कामकाज अर्थात सरकारी निर्णयको पक्षबाट हेर्दा इतिहासकै स्थीर भनिएको ओलीे सरकारका निर्णय यति अस्थीर देखिए जो कतिपय त उल्टिनबाट एकहप्तापनि कटेनन । यस अघिका कुनै सरकारका कामहरु त्यस्ता थिएनन जसका निर्णय यसरी विलकूलै विपरीत हुनेगरी निरन्तर नै फेरिइरहेका हुन् ।
निश्चयनै उल्लेख भएको त्योकाल खण्डका सरकार अस्थिर थिए, कुनैपनि सरकार छ देखि १८ महिनाका नै रहे । तर सरकार जति अस्थीर भएपनि तिनले सम्पादन गर्ने शासकीय कामचाहिँ यतिविधि अस्थीर थिएननन नै । हो, त्यसबेला एउटा सरकारले गरेका काम अर्को सरकारले उल्टाउथे नै, जस्तो यो दइतिहाइको ओली सरकाले पनि अघिल्लो सरकारले गरेका निर्णयहरु उल्टाएको थियो ।
तर सरकार अस्थीर रहेको भनिएको त्यो बेला जसको नेतृत्वमा र त्यो जति समयको सरकार बन्यो तिनले आफनो समयमा राम्रो नराम्रो जे जस्तो निर्णय गरे पनि त्यसलाई आफनो समय भरी अडाइनै रहे । यो कुरा त्यसबे.ला सरकारको नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्री मात्र होइन मन्त्रीहरुले समेत पनि आफनो यस्तो शासकीय हैसियतलाई कमजोर बनाउन दिएका अपवादमात्रै होलान् ।
विगतको यो पक्षलाई हेर्दा स्थीर भनिएको ओली सरकारको चित्र भिन्नै देखिन्छ । इतिहासमै सवभन्दा स्थीर भनिएका ओलीे सरकारमा कस्तोसम्म देखियो भने एउटा व्यक्तिलाई ‘अयोग्य भन्दै हटाउदै, फेरी योग्य भन्दै नियुक्त गर्दै र फेरी अयोग्य भन्दै हटाउँदै’ गरेका समेत पाइयो । आफुले गरेको निर्णय केही दिनमै त्यसको विपरीत हुनेगरी अर्को निर्णय गर्नेमा मन्त्री, प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद सबै समाननै देखिए जसले राजकीय कामको यस्तो हविगतको परिणाम के होला र यस्तो शासन कसले गरेको हो भन्ने प्रश्न खाडहुन्छ ।
अध्ययन होस, जुनजुनबेला जुनजुनठाउँमा निर्णय उल्टिएका छन ती ठाउँमा कुनैनकुनै स्वार्थसमूह लाभान्वित भएका छन र निर्णय उल्टाइएको पृष्ठभूमि हेरियो भने त्यस्तो लाभ पुर्‍याउननै यस्तो गरिएको भन्ने स्पष्टै देखिन्छ ।
कुनैपनि सरकारको प्रमुख दायित्व हुन्छ आफुले विधिवत रुपमा गरेका राजकीय निर्णयहरुलाई स्थायित्व दिनु । विगतका सबै सरकार आफु अनिश्चित र अल्पकालीन भएर पनि आफना निर्णयलाई कहिल्यै पनि यस्तो अस्थीर हुन दिएनन जो आज दुइतिहाइ हाराहरीको स्थीर सरकार छ तर उसका निर्णय केही घण्टा र केही दिनपनि टिक्दैनन ।
कतिसम्म भने विदेशबाट आउने खाद्यवस्तुमा रहेका विषादीको परीक्षण गर्ने जस्तो सर्वसाधारणको स्वस्थ्यसंग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा पनि पहिले परीक्षण नगर्ने निर्णय हुन्छ र पछि फेरी नगर्ने भन्ने हुन्छ भने अनुमान गरौं यस्तो अस्थीरता कति घातक होला ?
सरकारका निर्णय उल्टिइरहनु भनेको त्यसलाई कसैले आफनो हितमा चलाएको भन्ने बुझनु पर्ने हुन्छ । गएको मंसिरमा पुनर्गठनमा परेका मन्त्रीहरुको अनुभवलाई एकठाउमा राखियो भने चित्र झनै डरलाग्दो देखिन्छ । यसमा दुखद पक्ष कस्तो रह्यो भने प्रधानमनत्री आफै कसैबाट प्रभावित भएर काम गरिरहेका छन । जस्तो किसानका दुधले वजार नपाएको बेला धुले दूध आयात रोकौँ भनिँदा एकजना मन्त्रीले पदनै गुमाउनु पर्‍यो । ती भूतपूर्व मन्त्री भौतिक रुपमा हाम्रा सामु छँदैछन । आवश्यक परे थप बुझन सकिनछ । यस्ता कतिपय कामबाट त राष्ट्रघातनै हुने गरेका समेत देखिए । जस्तो खाद्यान्नमा विषादी परीक्षणको कुरा उल्टिनु भनेको त्यस्तो घात नै हो ।
विषादि परीक्षण नगर्ने कुरा कस्तोे ?
यो अघिल्लो असार (२०७६) को कुरा हो त्योमहनिाको २ गते को मन्त्रीपरिषदले सीमा नाकामा तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षणपछि मात्र भित्राउने निर्णय गर्‍यो उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सिफारिसमा । यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएको तेस्रो हप्ताको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै यो निर्णय फिर्ता लियो । कारण थियो छिमेकीदेशबाट नेपालमा तरकारी आपूर्ती गरिरहेकाहरुको विरोध । त्यो विरोधलाई लुकाउन र यो निर्णय आफैले फेरेको भन्ने देखाउन त्यसबेला प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र सचिवसम्मले कस्तो नाटक गरे भन्ने धेरैले सझिइनै रहेका हुनुपर्छ ।
यो निर्णय फिर्ता लिएपछि सरकारमाथि गम्भीर आरोप लाग्यो । यसले सीमाबाट विषादीयुक्त तरकारी र फलफूल परीक्षण विनानै आउने थियो र निर्णय लगत्तै त्यस्तो हुन पनि थाल्यो जो आजसम्मनै भैरहेको छ । सरकारलाई सत्तापक्षबाट नै विषादी परीक्षण रोक्ने निर्णयमाथि टेकेर भारतसँग झुक्न खोजेको आरोप लगाए । स्थिति त्यस्तै थियो । जव परीक्षण गर्ने निर्णय भयो त्यसलगत्तै भारतीय दूतावासले कडाप्रकारको पत्र लेख्यो सरकारलाइ । त्यो पत्र प्राप्तभएपछि सरकारले विषादी परीक्षणको निर्णय फिर्ता लियो मन्त्रिपरिषदको निर्णय मार्फत ।
यो बैठकको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गरेका थिए भन्ने उल्लेख भैरहनु नपर्ला । तर प्रधानमन्त्रीले त्योपत्र आफुसमम नआएको भनी वताइरहे हप्तादिनसम्म । पत्रगोप्य राखेकोमा कार्वाहीका कुरापनि आए । तर निर्णय उल्टिएको कारण राज्यबाटनै विषादी परीक्षण गर्न छाडिएको यतिठूलो काण्ड सरकार भित्र भने आफै सामसुम भयो ।
यताबाहिर विपक्षी कांग्रेसलगायत उपभोक्ता अधिकारकर्मीले सडकमै प्रदर्शन गरिरहे लामो समयसम्म । त्यसबेलाभनियो – छिटै उच्च प्रविधियुक्त परीक्षणशाला राखिने छ सबै सीमा नाकामा र परीक्षण थालिने छ । तर ०७७ सालको भदौ वित्नलाग्दा अर्थात १५ महिनाको यो अवधीमा पनि त्यस्तो परीक्षणकक्ष राखिएको छैन ।
सरकारको सीमामा विषादी परिक्षण गर्ने निर्णयले आम नागरिकको स्वास्थ्य संग सरोकार राख्थ्यो भने त्यो निर्णय फिर्ताहुदा केहीभारतीय व्यापारीहरुको । यता आफना नागरिकका स्वस्थ्यमा प्रत्यक्ष नै खेलवाड हुने यस्तोकाम समेत गर्न सरकार तयार भयो । पहिले गरिएको निर्णयमा सरकार अडेको थियो भने त्यो ठाउमा नागरिकको जिउधनको सुरक्षा गरिएको अतः सरकारको कर्तव्य पालना भएको भन्ने हुन्थ्यो । त्यसबाट फिर्ता हुदा सररकाररलेनै नेपाली जनताले स्वस्थ्यकर खाना खान हुँदैन पाउँदैनन भन्ने मान्यता राखेको भन्ने अर्थ लाग्यो ।
सीमामा विषदीको परीक्षणको योसन्दर्भबढी चर्चामा किनपनि आयो भने भारतीय भूमिका सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाल वजारका लागि भनी विशेष प्रकारले तरकारी उत्पादन गरिन्छ जहाँ मापदण्डभन्दा धेरैनै विषादी प्रयोग हुने गरेका थिए । त्यसकारण सरकार यस्तो विषादीपरीक्षण सन्दर्भमा आफनो निर्णयलाइ दुईहप्तापनि टिकाउन नसकेको कुरा विशेषरुपले चर्चामा आयो जो आफना नागरिरकको अहित र भारतीय व्यापारीको हित थियो । (अस्थिरताका अरु प्रसंग भाग दुइमा)
प्रकाशित मिति : आश्विन ७, २०७७ बुधबार ७ : ३१ बजे